चितवनमा उपचार सम्भव नभएपछि, ज्ञानेन्द्र शाहीलाई काठमाडौं पठाइयो !! – ताजा समाचार
चितवनमा उपचार सम्भव नभएपछि, ज्ञानेन्द्र शाहीलाई काठमाडौं पठाइयो !!
चितवन । अज्ञात समूहको आक्रमणबाट घाईते भएका ज्ञानेन्द्र शाहीलाई थप उपचारका लागि काठमाडौंमा पठाइएको छ ।
चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार गराइरहेका शाहीको अवस्थामा केही गम्भि,रता देखिएपछि थप उपचारका लागि काठमाडौं पठाइएको हो ।
शाहीलाई यति एयरलाइन्सको अन्तिम फ्लाईटमार्फत काठमाडौं लगिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
शाहीलाई आज दिउँसो भरतपुरको चौबिसकोठीस्थित ग्लोबल होटलमा अज्ञा,त समूहले कु,टपिट गरेका थिए । शाहीले आफुलाई भष्ट्राचार बिरोधी अभियान्ता भन्दै आएका थिए ।
प्रहरीका अनुसार बा ३ ख ४५ नम्बरको माइक्रोबसमा आक्र,मण हुँदा शाही घाइते भएका थिए । उनको टाउको, खुट्टा तथा शरीरका विभिन्न भागमा चो,ट लागेको छ । ढुंगा प्रहारबाट गाडीको चारैतर्फका सिसा फुटेको छ ।
आकस्मिक कक्षमा उपचार भैरहेको ज्ञानेन्द्र शाहीको यस्तो छ अवस्था
चितवन । आक्रमणमा घाइते भएका ज्ञानेन्द्र शाहीको उपचार भइरहेको छ । चितवन मेडिकल कलेजको आकस्मिक कक्षमा उनको उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान भन्दै कार्यक्रम गर्न चितवन पुगेका शाहीमाथि आज दिउसो आक्रमण भएको थियो । आक्रमणमा शाहीसँगै उनी पक्षका अन्य आठ जना घाइते भएका थिए । एक जना आक्रमणकारी श्याम थापा घाइते छन् । उनको पनि आकस्मिक कक्षमा उपचार भइरहेको छ ।
कार्यक्रमस्थल चौविसकोटीमा जाने क्रममा चितवनको ग्लोबल होटलबाट निष्किने क्रममा शाहीमाथि आक्रमण भएको थियो । पाँच/छ जनाको संख्यामा आएको युवाको समूहले शाही माथि आक्रमण गरेको थियो ।
ढुंगाप्रहारबाट क्षति भएको गाडी । यही माइक्रोमा ज्ञानेन्द्र शाही थिए ।